Momba ny DGI
Tantara fohy Taona 1975 ka hatramin'ny 1997. Ny foibem-pitatanana momba ny hetra sy ny Foibem-pitatanana ny fadintseranana dia notantanin’ny Foibem-pitatanana ankapobe iray natao hoe « Foibem-pitantanana ankapoben’ny Fitondran-draharaha ara-bola » (DGRF). Ny foibem-pitantanana miandraikitra ny hetra dia nizara sampan-draharaha telo saiky miavaka tsara :
sampan-draharahan’ny hetra mivantana ,
sampan-draharahan’ny hetra tsy mivantana sy ny
sampan-draharahan’ny fanoratana sy ny hajia .
Tamin’ny taona 1998,dia nitsangana ny Foibempitantanana ankapobe momba ny hetra ( DGI ) ary tafaray ny sampan-draharaha telo. Ankehitriny, araka ny fahafam-panefan’ny mpandoa hetra, ny fitsinjaram-paritra, dia afaka manantona ny ivotoeran’ketra ( CF ) izy, na any amin'ny sampan-draharaham-paritra momba ny orin’asa, na koa any amin'ny Foibem-pintantana momba ny orin’asa lehibe (DGE ) jereo ny tondro fifandraisanamomba izany, mba hahamora ny fanatanterahana ny filazana ara-ketra ataony.
Toy ny fiaraha-monina voarafitra ara-pomba demokratika, ho an’ny famatsiana ara-bola ny raharaham-panjakana sy ny programam-pandrosoana sasany, dia ilaina tokoa ny fandraisan’anjaran’ny tsirairay (amin'ny alalan’ny fanefana hetra).
Hatramin’ny 2007, ny foibem-pitantanana ankapobe momba ny hetra dia efa nametraka ny tetik’ady sy ny drafitra ho amin'ny fanavaozana ny fandrarahana ara-ketra. (2007-2011) ka ny firehana ara-ketra mahomby kokoa, tsotra kokoa sy mitodika amin'ny fifanarahana tsara kokoa ny mpandoa hetra.
Ao amin’io fanavaozana io, ny fandrarahana ara-ketra dia nanaiky fa: Haniky ny fidiram-bolam-panjakana hamaly ny tanjoana kendren’ny fitondram-panjakanaindrindra ireo izay voaraikitra ao antin’ny MAP.
Na dia voafetra ihany aza, na fanamafisana ny fanovana dia hanampy be dia be indrindra ny fanavaozana natao mifanaraka amin'ny tetikadin’ny fanavaozana. Izany dia ny famindrana ny enti-manao amin'ny loka napetraka.
Mifanaraka indrindra amin'ny teti-panavaozana, ny laojisialy SIGTAS dia hitarina amin'ny fiandohany aloha ho any amin'ny sampandraraham-paritra momba ny orinasa. Nanomboka tamin'ny taona 2007, dia nampiharina ny drafitra ara- tserasera ivelany sy anatiny ho fampandehanana ny fanavaozana izany.
Misy ivotoeram-pitantanana nankatoavina, hantsangana miara-miombonantoka amin'ny fikambanana ark’asa mba hanome : fanampiana arak’evitra, fanofanana,antontan’isa azo antoka, ho an’ny mpikambana ao ankoatra ny fanampiana azy amin'ny fanaovany filazana ara-ketra. Jereo ny organigrakan’ny Foibem-pitantanana ankapobe momba ny hetra